माकेकी नेतृ शान्तिको प्रश्‍नः प्रचण्ड कमरेड, जनताको लागि लड्‍न गएका योद्दाहरु कसरी धनाढ्‍य भए ? — OnlineDabali
माकेकी नेतृ शान्तिको प्रश्‍नः प्रचण्ड कमरेड, जनताको लागि लड्‍न गएका योद्दाहरु कसरी धनाढ्‍य भए ?
Posted on April 11, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । जनताको मुक्तिको लागि जनयुद्ध लड्न लगाएका नेताहरुका काठमाडौंमा महल ठडिएको भन्दै जनस्तरबाट विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । जनताको मुक्तिको लागि भन्दै जनयुद्धमा हाम फालेका नेताहरु रातारात धनाढ्य वर्गमा परिणत भए, माओवादीमा वर्ग उत्थान भयो भन्ने अावाज अब जनस्तरमा मात्रै सिमित रहेन् । मुक्ति र मृत्युको कसम खाएका नेताहरु कसरी करोडौं सम्पतीका मालिक भए ? भन्ने प्रश्न अब माओवादी केन्द्रकै नेता–कार्यकर्ताले पनि गर्न थालेका छन् ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रकी नेतृ शान्ति उपाध्यायले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सामाजिक संजालमा जनताको मुक्तिको लागि जनयुद्धमा लड्न गएका योद्दाहरु लड्दालड्दै कसरी धनी भए भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन, ‘कमरेड प्रचण्ड एउटै कुराले दिमाग खाईरह्यो,गरिबको मुक्तिका लागि लडेका योद्दाहरु लड्दालड्दै कसरी धनी भए ?’
सामाजिक संजाल फेसबुकमा प्रचण्डलाई प्रश्न गरेकी शान्तिले अनलाइन डबलीसँग कुराकानी समेत गरेकी छन् । उनले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका एक तहका नेता–कार्यकर्ताहरु नबधनाढ्य वर्गमा परिणत भएको देखेर आफूले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेको बताइन् । उनले जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता र हाल पार्टी अध्यक्ष भएका कारण सम्पूर्ण बेथितीको जवाफ पनि दिनुपर्ने तर्क गरिन् । “प्रचण्डले व्यक्तिगत रुपमा धन जम्मा गर्नु भयो होला भन्ने त मलाई लाग्दैन तर त्यो गर्नेलाई संरक्षण पाएका छन् । अध्यक्षको वरिपरी पनि उनीहरु नै छन् । मुक्ति वा मृत्युको कसम खाएर जनयुद्ध लड्न गएका योद्दाहरु कसरी धनाढ्य वर्गमा परिणत भए, यसको जवाफ अध्यक्ष भएकोले प्रचण्डले नै दिनुपर्छ” शान्तिले भनिन् ।
माओवादीका अधिकांश नेताहरुले पैसा कमाएको बताइरहँदा हामीले तपाईँले पनि कमाउनु भयो होला नी ? प्रश्न गर्दा नेतृ शान्तिले आफूले पार्टीमा पैत्रिक सम्पति लगाएको बताइन् । उनले आफ्नो सम्पती छानविन गर्न माग समेत गरिन् । उनले दिवाकर बालग्राममा आफूले पैत्रिक सम्पती खर्च गरेको बताइन् । आफूजस्तै अरु धेरै इमान्दार कार्यकर्ताको पनि सो बालग्राममा रुपैयाँ बुझाएको बताइन् ।
माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु दलालको रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै शान्ति प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पारेको बताउँछन् । उनले भनिन्, “पार्टीभित्रका दलाल नेताहरु, जो सत्ता नभए बाच्न नै सक्दैनन्, उनीहरुले नै पार्टी बिगारेका छन्, प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पारेका छन् ।” उनले त्यो घेराबाट बाहिर अाउन नसक्ने प्रचण्डको कमजोरी भएको समेत बताइन् ।
एमाले-माके एकता बैशाख ९ मा पनि नहुने पक्कापक्की जस्तै, यी हुन् चार बाधक
केरुङ-काठमाडौं रेलको कुरा छोडेर रक्सौल-काठमाडौं माग गर्नु ओलीको कुरूप मानसिकता